အဘယ်အကြောင်းအရာများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာတမ်း၏ပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေးလော။ ပြProbleနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အဘယ်အရာကိုအရေးကြီး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူအချက်များ (2016)
မှတ်ချက်များ: ဤလေ့လာမှု၌, porn အသုံးပြုမှုပမာဏအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးအနှုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာ (စမ်းသပ်ခြင်း-Revised SAST-R ကိုပြသည့်လိင်စွဲလမ်းနေဖြင့်အကဲဖြတ်ကဲ့သို့) နှင့်အခြားအချက်များကပြောပါတယ် ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ။ အဲဒီလေ့လာမှုလည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုရှာကြံ Non-ကုသမှုစစ်တမ်းကောက်ယူ။
porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အခြားလေ့လာမှုများကြိမ်နှုန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကခန့်မှန်းမရဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
တစ်ဦးထက်ပိုသောစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်: porn စွဲများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအမျိုးသားများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ သူတို့အားလွဲမှားစွာအနက်အားဖြင့်တိတောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင် Grubbs et al ။ 2015ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းခြင်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ။
J ကိုလိင် Med ။ 2016 မာ 22။ pii: S1743-6095 (16) 00346-5 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.02.169 ။
Gola M1, Lewczuk K သည်2, Skorko M3.
ညစ်ညမ်းအင်တာနက်နည်းပညာနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်။ လူအများစုအဘို့, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PU) ဖျော်ဖြေရေးဖြစ်၏ အခြို့သောအဘို့ပြုလုပ် Out-of-ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူများအတွက်ကုသမှုရှာကြံစေနိုင်ပါသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများမှ PU လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်မှ PU နှင့်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ကြိမ်နှုန်းအကြားတိုက်ရိုက် ဆက်စပ်. ဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
သူတို့၏ပြPUနာဖြစ်စေသော PU ၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကုသမှုကိုရှာဖွေနေသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲမှုကြောင့်သို့မဟုတ် PU နှင့်သက်ဆိုင်သောပိုမိုရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်၊ တ ဦး တည်းရဲ့အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု၏။
တစ်ဦးကစစ်တမ်းလေ့လာမှု 569 ပြဿနာမှ PU (၎င်းတို့၏ကနဦးခရီးစဉ်ကိုအပြီး psychotherapists အားဖြင့်ရည်ညွှန်း) အတွက်ကုသမှုရှာကြံအပါအဝင်ဟောင်းနှစ်ပေါင်း 18 မှ 68 လိင်ကွဲကော့ကေးဆပ်ယောက်ျား 132 ၏ကောက်ယူခဲ့သည်။
အဓိကရလဒ်အစီအမံ Self-ဖော်ပြခဲ့သည်မှ PU ၎င်း၏အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အမှန်တကယ်ကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူခဲ့ကြသည်။
PU နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများနှင့်ပြproblemနာရှိသော PU အတွက်ကုသမှုရှာရန်ရင်းမြစ်များနှင့်နောက်ထပ်အချက်များ (ဥပမာ - စတင်ခြင်းနှင့်နှစ်၏နှစ်အရေအတွက်၊ ဘာသာတရား၊ အသက်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ) တို့ကိုရှင်းပြသည့်မော်ဒယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကုသမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်သိသိသာသာနည်းသော်လည်းအားနည်းစွာပင် PU ကြိမ်နှုန်း (r = 0.21, P <.05) နှင့်သာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဤဆက်စပ်မှုသည် PU နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများ (အားကောင်းသောနီးပါးစေ့စပ်ဖျန်ဖြေခြင်းအရွယ်အစား၊ k) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။2 = 0.266) ။ PU နှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားစပ်လျဉ်းသိသာကြီးနှင့် Self-အစီရင်ခံပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို (အားနည်းနေ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျန်ဖြေကကမကထပြုခဲ့; ဋ2 = 0.066) ကုသမှုရှာကြံမဟုတ်သူများအတွက်။ PU စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အသက်သည်အရေးမပါပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်မျှမျှတတတပ်ဆင်ခဲ့သည် (နှိုင်းယှဉ်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း = 0.989; အကြမ်းဖျင်း၏အမြစ်ယုတ်စတုရန်းအမှား = 0.06; စံအမြစ်ယုတ်စတုရန်းအကြွင်းအကျန် = 0.035) နှင့်ကုသမှု - ရှာဖွေအပြုအမူအတွက်ကှဲလှဲ၏ 43% ကရှင်းပြသည် (1% PU ၏ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်ရှင်းပြသည် ၄၂% ကို PU နှင့်ဆက်စပ်သောအနှုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများဖြင့်ရှင်းပြခဲ့သည်။
PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမျှသာအရေအတွက်ထက်ကုသမှုရှာကြံကြိုတင်ခန့်မှန်း။ PU ၏ကြိမ်နှုန်းလူနာအားလုံးတစ်ဦး core ကိုပြဿနာမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ပြဿနာမှ PU ၏ကုသမှုမဟုတ်ဘဲမျှသာအပြုအမူများ၏အကြိမ်ရေလျော့ပါးစေရန်ထက်အရည်အသွေးအချက်များ, ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ပြဿနာမှ PU များအတွက်အနာဂတ်အဖြေရှာတဲ့စံဤပြဿနာများ၏ရှုပ်ထွေးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
KEYWORDS: Hypersexual အပြုအမူ; ညစ်ညမ်း; ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; Psychotherapy; ကုသမှုခံယူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအရ PU သည်အနုတ်လက္ခဏာပြသောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ဤရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်ကုသမှုကိုရှာဖွေသည် (ပုံ ၁; Path B) ။ PU ၏ကြိမ်နှုန်းသည်တစ် ဦး တည်းသည် PU နှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်သောအခါပြaticနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုကုသမှုရှာရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြသသည် (ပုံ ၂) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်လေ့လာမှုများအရထိုကဲ့သို့အားနည်းနေသည့်ဆက်ဆံရေးကိုသွယ်ဝိုက်အကြံပြုခဲ့သည် Cooper နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပြသခဲ့သည်မှာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သောဘာသာရပ်များ (PU သာမကသာမကလိင်စကားပြောခန်းများ) တွင်ပါ ၀ င်သောအလင်းရောင်သုံးစွဲသူ ၄၂၇၈ (၂၁.၆%) တွင် ၂၂.၆% သည်သူတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းတင်ပြခဲ့သည် ၄ င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ ၏နေရာများ၊ ၇၆၄ သုံးစွဲသူ ၇၆၄ ၏ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် (တစ်ပတ်လျှင် ၁၁ နာရီ) မည်သည့်အခါမျှထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမျိုးမကြုံခဲ့ရပေ။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒုတိယအဆင့်မှာကျနော်တို့လေးယောက်အပြိုင်မှ PU နှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးပြုပြီ ( စတင်ခြင်းနှင့်မှ PU ၏အနှစ်  အရေအတွက်  ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို  ဘာသာရေးစမ်းသပ်ငါတို့မော်ဒယ်တိုးချဲ့ အလေ့အကျင့်။ , ပုံ 3) ကိုကြည့်ပါ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြအသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းစတင်ခြင်းနှင့်နံပါတ်များကိုသက်ရောက်မှု  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Datasets အတွက်အရေးမထင်ရှား။ , ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်မရှိခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းထက်လုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ်မှ PU တစ်အလားအလာအောက်ပိုင်း longitudinal သက်ရောက်မှုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤရလဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာများန့်အသတ်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့မှ PU ၏စတင်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်များ '' လက်ရှိအသက်အရွယ်အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်မှ PU ၏နှစ်ပေါင်းများစွာတွက်ချက်။ ဒါဟာအချို့ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့စတင်ခြင်းကနေတစ်ခုသာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့ကြသည်လျက်, အရှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွင်းတင်ဆက်ဒီအတိုင်းအတာတိဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU ၏နှစ်ပေါင်းသူအရေအတွက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေန့်အသတ်ကြောင့်ပိုလန်ဘာသာစကား  တွင်ရရှိနိုင် hypersexual အပြုအမူအကဲဖြတ်များအတွက်သာမေးခွန်းလွှာဖြစ်သကဲ့သို့အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေဘို့ကျနော်တို့ SAST-R ကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မေးခွန်းလွှာတစ်ဦးမှ PU ဖို့မသာ related အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သညျ။ PU နှင့် SAST-R ကိုရမှတ်၏ကြိမ်နှုန်းတို့အကြားအဆိုပါရရှိသောသိသိသာသာစပ်လျဉ်းသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြား, ကလည်း PU နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေကိုတိုင်းတာသောပြသထားတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒုတိယအဆင့်မှာကျနော်တို့လေးယောက်အပြိုင်မှ PU နှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးပြုပြီ ( စတင်ခြင်းနှင့်မှ PU ၏အနှစ်  အရေအတွက်  ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကို  ဘာသာရေးစမ်းသပ်ငါတို့မော်ဒယ်တိုးချဲ့ အလေ့အကျင့်။ , ပုံ 3) ကိုကြည့်ပါ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြအသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းစတင်ခြင်းနှင့်နံပါတ်များကိုသက်ရောက်မှု  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Datasets အတွက်အရေးမထင်ရှား။ , ထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်မရှိခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းထက်လုပ်ငန်းဆောင်တာပေါ်မှ PU တစ်အလားအလာအောက်ပိုင်း longitudinal သက်ရောက်မှုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဤရလဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာများန့်အသတ်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့မှ PU ၏စတင်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်များ '' လက်ရှိအသက်အရွယ်အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်မှ PU ၏နှစ်ပေါင်းများစွာတွက်ချက်။ ဒါဟာအချို့ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့စတင်ခြင်းကနေတစ်ခုသာကန့်သတ်အချိန်များအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့ကြသည်လျက်, အရှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွင်းတင်ဆက်ဒီအတိုင်းအတာတိဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပုံမှန်အစည်းအဝေးမှ PU ၏နှစ်ပေါင်းသူအရေအတွက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေန့်အသတ်ကြောင့်ပိုလန်ဘာသာစကား  တွင်ရရှိနိုင် hypersexual အပြုအမူအကဲဖြတ်များအတွက်သာမေးခွန်းလွှာဖြစ်သကဲ့သို့အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေဘို့ကျနော်တို့ SAST-R ကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မေးခွန်းလွှာတစ်ဦးမှ PU ဖို့မသာ related အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သညျ။ PU နှင့် SAST-R ကိုရမှတ်၏ကြိမ်နှုန်းတို့အကြားအဆိုပါရရှိသောသိသိသာသာစပ်လျဉ်းသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြား, ကလည်း PU နှင့်ဆက်စပ်သောဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေကိုတိုင်းတာသောပြသထားတယ်။
ကျနော်တို့ကယခင်လေ့လာမှုများ  အစီရင်ခံခဲ့သည်အဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားစျယာနျဘာသာတရားကို Self-ရိပ်မိပြဿနာမှ PU များကိုချဲ့ထွင်စေခြင်းငှါမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ဒါကယူဆချက်တစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝ (ပုံ။ 3) တွင်ဘာသာရေးအရေးပါမှုအဆင့်တစ်ခုကြေငြာအဖြစ်တိုင်းတာပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကိုများအတွက်စစ်မှန်သောဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာသတိထားစာမေးပွဲကဒီသက်ရောက်မှုကိုသာ Non-ကုသမှုရှာဖွေသူများအကြားသိသာထင်ရှားသောကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကုသမှု-ရှာဖွေနေသူများထဲတွင်စျယာနျဘာသာတရားကိုအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အမှန်တကယ်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်စျယာနျဘာသာတရားကိုထို့နောက်မျှသာကြေငြာ၏ပိုကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းပေးထားအံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်ရသောအရေးမပြုပြီ (ပုံ။ 3), ဖြစ်ကြသည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်စျယာနျဘာသာတရားကို၏ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အခန်းကဏ္ဍအလေးပေးနှင့်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများဘို့လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်မှ PU နှင့် Self-ရိပ်မိစွဲအကြား up-to-date ဖြစ်အောင်စပ်လျဉ်း, လူဦးရေ [36,37] ရှာကြံသာ Non-ကုသမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သညျ။ ထို့ကြောင့်ကုသမှု-ရှာကြံဘာသာရပ်များအကြားတွင်မျှထိုကဲ့သို့သောစပ်လျဉ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်, သေးပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုဘာသာရပ်များအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ပုံတူကူးယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့မှ PU ၏ဆက်စပ်အတွက်နောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖွဲ့စည်းရန်ကြာဖြေဆိုသူ '' အသက်အရွယ်နှင့်အချိန်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်မှ PU ၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုအရေးမခန့်မှန်းအဖြစ်ပြီးခဲ့သည့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကနေကြာအချိန်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သော variable ကိုအဆိုပါဘာသာရပ်များ '' ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းမှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆက်ဆံရေး (တရားဝင်သို့မဟုတ်အလွတ်သဘော) တွင်ဘာသာရပ်ကနောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာတိုတောင်းအချိန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ဤ variable ကိုမှ PU ၏ကြိမ်နှုန်းဖို့အဆိုးဆက်စပ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အကြား-အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ် (စားပွဲတင် 2) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, ပြဿနာမှ PU များအတွက်ကုသမှုရှာကြံဘာသာရပ်များ, ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်းခဲ့ကြသည်ကွောငျးဖျောပွသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာတော့ဘူးအချိန်ကြေငြာ ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းသုံးပြီး, အတှေ့အကွုံကိုပိုမိုပြင်းထန် အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေ။ သူတို့အားဆက်ဆံရေး Direction အဖွဲ့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ တဖကျတှငျမူဆက်ဆံရေးအတွင်းအခက်အခဲများအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေ ပို. မကြာခဏမှ PU နှင့်တိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အနိမ့်ရရှိမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Carvalheira et al နေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်ပြောင်းပြန်မကြာခဏမှ PU နှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေဆက်ဆံရေးနှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အခက်အခဲများ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်။  နဲ့ Sun et al ။  ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များ၏တိုးချဲ့ဗားရှင်း analysis ကျွန်ုပ်တို့သည်နိဒါန်း၌သူတို့ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဦးရေးဆွဲပြီးတွေးဆချက်တွင်မပါဝင်ခဲ့ပါကြောင်း3ဆက်ဆံရေး (အမှားအသုံးအနှုန်းများ၏ဆက်စပ်မှု) ပြသခဲ့သည်။ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာတွေ 1 ။ ) ပြင်းထန်မှုတစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၏အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်  အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါညွှန်း, In-line ကိုယခင်သုတေသနနှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, အထီးကျန်  ရငျးနှီးသညျ့မိတ်ဖက်ရှာခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး [53,54] ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲများ။ ကျွန်တော်မှ PU နှင့်မှ PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာတွေအကြိမ်ရေအကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှု (ပုံ။ 2) ပြသခဲ့သည်ကြောင့်သူတို့အားအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြာရှည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး [29,27,30] ဖန်တီးခြင်းအတွက်အဆိုပါအခက်အခဲများအထောက်အကူပြုကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဒီစပ်လျဉ်း၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သေးမသိရသေးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ပြဿနာမှ PU နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအခက်အခဲများတစ် bidirectional ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားဖြည့်ကြောင်းတွေးဆနိုင်ပါသည်။2။ ) Non-ကုသမှုရှာဖွေနေသူ (စားပွဲတင် 2) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့နောက်ဆုံး dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြီးကတည်းကကြာအနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာနှင့်အချိန်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ဦးဆက်စပ်ပုံစံ .. may, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားပြင်းထန်မှုရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း PU နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (စားပွဲတင်2နှင့်ပုံ။ 3) ရှိခြင်း၏အနိမ့်အခွင့်အလမ်းတွေကို။ မကြာမီကလေ့လာမှုများမကြာခဏမှ PU အပျက်သဘောဆက်ဆံရေး  အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့မိတ်ဖက်  နှင့်အပြုသဘောနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောအပြုအမူတွေ၏ခံစားဖို့ related ကြောင်းပြသပါ။ တနည်းကား, dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရလဒ် (3) ဘာသာရေးဘာသာတရားနှင့်နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကတည်းကကုန်လွန်အချိန်အကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးအသေးစိတ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရေးနှင့်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအဓိကထားသောယခင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသော်လည်း [36, 37] လေ့လာမှုများအရဘာသာရေးမဟုတ်သောသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံပိုမိုများပြားလာသည်ဟုဖော်ပြသည် [55,56] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု  ။ ဤကွဲပြားခြားနားမှုများမှာအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများကိုသူတို့၏အသက်တာ၏ဗဟိုချက်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသောလူအများစုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပိုလန်ကဲ့သို့သောဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရှေးရိုးဆန်သောဘာသာရေးထုံးတမ်းများအရနမူနာကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်: ) ။ ဆွေးနွေးထားသည့်ဆက်နွယ်မှုများသည်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်သူတို့၏လိင်အရစွဲလမ်းမှုအပေါ်သူတို့၏ပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စနစ်တကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံယူထိုက်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအသိပညာအဆိုအရဒီလေ့လာမှုမှ PU ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကုသမှု-ရှာကြံ (ဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စိတ်ပညာရှင်, စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ် sexologist သွားရောက်လည်ပတ်အဖြစ်တိုင်းတာ) ပြဿနာမှ PU များအတွက်၏အမှန်တကယ်အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဒီလယ်ပြင်၌အနာဂတ်လေ့လာမှုများ, နှင့်ကုသမှု, PU (ထက်မှ PU နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာအဖြစ်, အစားက၎င်း၏မျှသာကြိမ်နှုန်း (အရေအတွက်) ထက်တစ်ဦးချင်း (အရည်အသွေးကို) ၏ဘဝအပေါ် PU ၏သက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းညွှန်ပြ အကြိမ်ရေ) ကုသမှု-ရှာအပြုအမူ၏အထင်ရှားဆုံးခန့်မှန်းကြသည်။ အဆိုပါရရှိသောရလဒ်များကို၏ရှုထောင့်ကနေကျနော်တို့ (အခြား Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလည်းဖြစ်ကောင်းနှင့်), PU နှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာအပြုအမူအကျိုးဆက်များကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများ defining နှင့်အသိအမှတ်ပြုအတွက်ကိစ်စတှငျယူသင့်ကြောင်း postulate ပြဿနာမှ PU ။ ငါတို့သည်လည်းနောက်ထပ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ကျေနပ်ဆက်ဆံရေးဖန်တီးခြင်းအတွက်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများတို့တွင်အရငျးနှီးဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အရည်အသွေးကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပြဿနာ Porn အသုံးပြုမှု: အကျိုးဆက်များ vs. အရေအတွက်
ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S က ~4မိဖတ်ခြင်းအားဖြင့်
အသစ် လေ့လာချက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမာတေယူချ် Gola, Karol Lewczuk နှင့် Maciej Skorko, အသုံးပြုပုံပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုသို့လူတွေကိုမောင်းသောအချက်များမှာကြည့်ရှုသည်။ အထူးသဖြင့်, Gola နဲ့သူ့အဖွဲ့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များ၏ကြိမ်နှုန်းကပိုအရေးကြီးလှသည်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ချင်တယ်။ Unsurprisingly အဖြစ် လိင်စွဲကုသမှုအထူးကု porn ဖော်ထုတ်နှင့်ကုသပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုသည်ညစ်ညမ်းပမာဏကိုသိသိသာသာလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာသူသို့မဟုတ်သူမ၏ porn-related အကျိုးဆက်များထက် addicts သည့်အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒေါက်တာပက်ထရစ် Carnes ကဲ့သို့ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့အဖျောမြားနှငျ့ရေးသားခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ဒေါက်တာ Carnes နဲ့ကျွန်မတစ်သမတ်တည်းသတ်မှတ်ကြပါပြီ porn စွဲ အောက်ပါသုံးခုအချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး:
အလွန်အမင်း objectified ညစ်ညမ်းပုံရိပ်နှင့်အတူစွဲ၏အချက်ဖို့အတွက်အဆက်မပြတ်
porn အသုံးပြုမှု-လျော့ဆက်ဆံရေးကို, အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းအတွက်ဒုက္ခ, စိတ်ကျရောဂါ, အထီးကျန်မှုတွေ, စိုးရိမ်ပူပန်ယခင်ကပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုများဆုံးရှုံးခြင်း, အရှက်ကွဲခြင်း, စတာတွေအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်, ဘဏ္ဍာရေးဒုက္ခများ, ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော negative အကျိုးဆက်များ
သငျသညျကိုသတိပြုမိကြပေမည်ကဲ့သို့ပင်ဤသတ်မှတ်ချက်အဘယ်သူအားမျှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းဖော်ပြထားခြင်း (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရေအတွက်အတိုင်းအတာ) ။ ဤအမှု၌, porn စွဲကဲ့သို့ဖြစ်၏ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်သင် / အသုံးပြုမှုကိုသောက်ရဘယ်လောက်မဟုတ်ဘူးရှိရာ, ကအရက်သောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြု. သင်၏အသက်တာမှမယျ။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်သင်တန်း၏, ကျနော်တို့အလားအလာကအနုတ်အကျိုးဆက်များမှ porn အသုံးပြုမှုပမာဏချိတ်ဆက်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများကိုမြင်ရပါတယ်။ သို့သော်ဤမကြာသေးမီကထုတ်ဝေသုတေသနသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုချက်ကိုကြောင်းအကျိုးဆက်များ (ထက် quantified အသုံးပြုမှုအချို့ကိုမျိုး) မသိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ်ထွန်းသောညစ်ညမ်းစွဲဖော်ထုတ်ကုသသောအခါကြှနျုပျတို့အသုံးပွုသငျ့မူလတန်းအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Gola လေ့လာမှုအတွက်ဒေတာလိင်ကွဲအထီးပိုလန်နိုင်ငံသားတစ်နမူနာကနေမတ်လ 2014 ကနေမတ်လ 2015 မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့သည်။ 569 ယောက်ျား၏စမ်းသပ်မှုနမူနာ (အသက် 28.71 ဆိုလို) ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်သူကို 132 ယောက်ျားပါဝင်သည်။ (နမူနာ၏ကြွင်းသောအရာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ) "အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ" ဟုတစ်ဦးပိုလန်လိုက်လျောညီထွေသုံးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်-Revised (SAST-R), တစျဦးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ထဲကလျှင်အဖြစ်အဆက်မပြတ်, အကျိုးသက်ရောက်စေ, ဆက်ဆံရေးဟာနှောင့်အယှက်များနှင့်ခံစားချက်၏အကဲဖြတ်ဆီသို့ရည်ရွယ်နှစ်ဆယ် Yes / No မေးခွန်းများကိုအတူ။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုစပိုင်းတွင်သိသိသာသာဆက်စပ်ရှာဖွေတာ, ကုသမှုရှာကြံများအတွက် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် propensity ပမာဏမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ဒီပြဿနာမှာ (Peripheral) ရှာဖွေနေအစောပိုင်းကသုတေသနပြန်ပါသည်။ ဥပမာ, လေ့လာမှုများကဦးဆောင် Valerie Voon (ကိန်းဘရစ်, ဗြိတိန်) နှင့် daisy Mechelmans (ကိန်းဘရစ်, ဗြိတိန်) ကုသမှု-ရှာကြံစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ porn မှာတစ်ပတ်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.75 နာရီကိုကြည့်ရှုသော်လည်း non-ကုသမှုရှာကြံထိန်းချုပ်အုပ်စု, porn မှာတစ်ပတ်ကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13.21 နာရီကိုကြည့်ရှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ကင်းဘရစ်လေ့လာမှုများ, porn အသုံးပြုမှုပမာဏအကြားဆက်ဆံရေးကိုစဉ်းစားအကျိုးဆက်များနှင့် neurobiology နှင့် cue reactivity ကို၏ရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကုသမှု-အစားမရှာခဲ့ပါဘူး။
Gola ရဲ့အဖွဲ့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအပြည့်အဝဖျန်ဖြေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ချိန်ညှိတဲ့အခါ, porn အသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်ရှာကြံကုသမှုအကြားဆက်ဆံရေးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဤအတောအတွင်းအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ကုသမှုရှာကြံကြားရှိ link ကိုခိုင်ခံ့ကြီးနှင့်အလားအလာအချက်များ (ပထမ porn အသုံးပြုမှုအသက်, porn အသုံးပြုမှုနှစ်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်) ဖြန်ဖြေမျိုးစုံမှဆွေမျိုးခိုင်မာတဲ့နေ၏။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကောက်ချက်ချ Gola, Lewczuk နှင့် Skorko ဦးဆောင်: "ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာတွေညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမျှသာအရေအတွက်ထက်ကုသမှုရှာကြံကြိုတင်ခန့်မှန်း။ porn အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေလူနာအားလုံးတစ်ဦး core ကိုပြဿနာမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုကုသမှုမဟုတ်ဘဲမျှသာအပြုအမူများ၏အကြိမ်ရေလျော့ပါးစေရန်ထက်အရည်အသွေးအချက်များ, ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ Choir ဟောပြော
အချို့သောနည်းလမ်းများအတွက်, ဒီသစ်ကိုသုတေသနပြုရိုးရှင်းစွာကျနော်တို့ပြီးသားကိုသိသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းမှာရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အပြုအမူအပျက်သဘောနည်းလမ်းတွေရှိသူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏ဘဝကိုထိခိုက်လျှင်သူသို့မဟုတ်သူမ / ကအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ချင်ပေလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းမှာကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုသို့ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေမပါလျှင်ပြောင်းပြန်, ထို့နောက်သူသို့မဟုတ်သူမဖြစ်ကောင်းအဲဒီဒေသမှာမဆိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤရွေ့ကား, မခွဲခြားဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားအသုံးပြုနေသည် porn ၏ပမာဏ၏မှန်သည်။ တစ်ဖန်, တကလူတစ်ဦးကိုအသုံးပြု porn ၏ပမာဏမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒါဟာ porn အသုံးပြုမှုကိုရေတွက်ကြောင်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဆက်ဆံရေးကို, Self-image ကိုများနှင့်သာယာဝပြောရေးဖို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။
သို့သော်ဤလေ့လာမှုတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစိတ်ရောဂါရောဂါအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲတရားဝင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှေ့ဆက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးဒါဝေး၌ဤအလွန်အစစ်အမှန်နှင့် debilitating ရောဂါစာရင်းပြုစုရန်ပျက်ကွက်, လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲဆီသို့ကန်းမျက်စိလှည့်လိုက်ပါတယ် DSM-5 တစ်ခုယား-ပြန်တမ်းရှိနေသော်လည်း ဟားဗတ်ရဲ့ဒေါက်တာမာတင် Kafka နေဖြင့်အနေအထားစက္ကူ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်အကြံပြု။ ဒါလုပ်နေတာများအတွက်ယားရဲ့တစ်ခုတည်းသောလူသိရှင်ကြားဖော်ပြထားအကြောင်းရင်းစွဲခြင်းရောဂါအပိုင်းဖို့ DSM-5 ရဲ့နိဒါန်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်:
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအဖြေရှာတဲ့စံတည်ထောင်ရန်မလုံလောက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိရာ "လိင်စွဲလမ်း", "လေ့ကျင့်ခန်းစွဲ," သို့မဟုတ် "စျေးဝယ်စွဲ," မပါဝင်ပါကဲ့သို့သောအမျိုးအစားခွဲများနှင့်အတူအချို့သောအသုံးအနှုန်းအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, အပြုအမူတွေအုပ်စုများ, စိတ်ရောဂါအဖြစ်ကဤအပြုအမူကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်နှင့်သင်တန်းဖော်ပြချက်။
ဒေါက်တာ Kafka မဟုတ်ဘဲဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့ကသူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုစာတမ်းတွင်အသေးစိတ်အဖြစ်အမှန်တကယ်မှာတော့, အယားကိုတရားဝင်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြုရန်အတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားထက်ပိုမိုရှိသေး၏။ တကယ်တော့လက်ရှိ DSM-5 (အထူးသဖြင့်လိင်-related မမှန်) တွင်ဖော်ပြထားသောမမှန်အများအပြားသိသိသာသာလျော့နည်းထောက်ခံသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုယားနောက်ကွယ်မှ-The-ကြိမ်ရပ်တည်ချက်၎င်း၏ခေါငျးမာများအတွက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ် (အစား "ဆေးဝါးနှင့်အာမခံကုမ္ပဏီများထံမှ / နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးဖိအား" ထက်) "သုတေသနမရှိခြင်း" ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။
ဝမ်းသာစရာ လိင်စွဲလမ်းအသစ်သုတေသနတစ်ဦးအတော်လေးပုံမှန်ပေါ်ထွက်လာဒေါက်တာ Kafka ရဲ့အကြံပြုအဖြေရှာတဲ့စံ (နှင့်သောသိသိသာသာအလားတူသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဘို့ကိုအတည်ပြုပေးသော Gola, Lewczuk နှင့် Skorko မှဤလေ့လာမှုအသစ်အပါအဝင် လိင်စွဲကုသမှု အထူးကု) နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးပါပြီ။
ဒီတော့ယားကိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်နှင့်ကု သ. ရောဂါအဖြစ်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြုသော DSM-5 တစ်ခု addendum နှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသနည်း ဒီလေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး, ဖြစ်ကောင်းဘူး။ အားလုံးပြီးတဲ့အခါ, Clinician အဆိုပါယားနှောင်းပိုင်းတွင်ပါတီနီးပါးအမြဲဖြစ်ပါသည်စိတ်ရောဂါမမှန်ရှုမြင်ထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများမှသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအောင်မှကြွလာသောအခါ။ ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေတောင်ပေါ်သကဲ့သို့, ယားနောက်ဆုံးမှာလူဦးရေရဲ့အားလုံး segments များအတွက်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ကြီးထွားလာဖြစ်ပွားမှုအသိအမှတ်ပြု, ညံံ့မှရပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သည်အထိ, သင်တန်း, ဘာမျှများများစားစားအပြောင်းအလဲများကို။ အနာရောဂါငြိမ်းစေမျှော်လင့် porn စွဲနေတုန်းပဲကုထုံးနှင့် 12-Step ပြန်လည်နာလန်ထူရှာကြလိမ့်မည်, ဤယောက်ျားမိန်းမတို့ပြုမူဆက်ဆံသူ Clinician အဆိုပါယားရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုဖြင့်သို့မဟုတ်မရှိပဲ, သူတို့ကအကောင်းဆုံးကိုသိရလမ်းဒီတော့ပြုလိမ့်မည်။